Madagasikara afaka no mandroso ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Aoka ny rariny hikoriana... il y a 52 minutes
P.Prospère il y a 15 jours
Ahoana no ampifandraisana ny fahafahana nimatimatesan’ireo tia tanindrazana, nanohitra ny mpanjanaka, amin’ny hetahetam-pandrosoana niainantsika nandritra ny 60 taona, saingy tsy nisotroana afa-tsy ny ngidim-pahantrana ? Tsy fitia te hanamaloka ny fijery ny zava-misy no ilazana izany, fa fitadiavana ny lalan-kivoahana amin’izato fihodinkodinana mahafanina toa tandrimo, mahafaly ny mpilalao azy, fa mahajenjina ny mpijery mitazana fotsiny.
Ny fahafahana dia baikom-pitoloman’ny tia tanindrazana, ka zary lova politikan’ny manam-pahefana taorian’ny 1960, na Pisodia no anarany na Akofa maivana. Nanjary tolon’ny vahoaka madinika izany tato aorianan’ny 1972. Ny fahafahana dia nanjary fahaleovantenam-pirenena manana fiandrianana eo anivon’ny firaisambe eran-tany. Ny firenena mahaleo tena no mikatsaka ny fandrosoany avy eo ary malalaka amin’ny famaritana ny lalan-kizorany. Indrisy anefa fa hamarinin’ny zava-misy ny tsy fahombiazantsika : tany andalam-pandrosoana tsy nahita fandrosoana no difotry ny ady amin’ny fahantrana. Avy amin’ny ady anaty akata ho an’ny fahafahana dia miditra amin’ny akatan’ady amin’ny fahantrana. Afa-miara-dalana ve ny fahafahana sy ny fandrosoana ?
Ny « andraso andraso lava » no mahadiso hevitra antsika. Ny andraso andraso anefa, hoy ny Ntaolo, no mahariva ny andro, dia tafiditra anaty alina mangitsoky ny tsy ahita-mitsinjo isika. Ary dia manao jamba mifampitantana; na fanjakan’ny toka-maso. Sodokan’ny somambisamby dia manao vikin’alina.
Ho an’Andriamatoa Jacques Attali, mpandinika Frantsay, ny firoboroboan’ny politikan’ny trosa ankehitriny dia endriky ny fisalasalana sy ny manjavozavo tsy ahita-mitsinjo dia mangataka andro ny olona. « Raha ho faty ihany, aleo rahampitso na matesa rahavana, raha ho faty rahavana, matesa ny omby ». Samy manao izay ho afany sisa ny tsirairay ary tsy afaka mifampijery sy mifampitsinjo intsony. Tolona ambony vatolampy ka izay ratsy fitana no vaky loha. « Ny politikan’ny trosa zary fanao ankehitriny dia famonoana eritreritra androany, sy fanantenana fa ny fotoana ve tsy hanova ny ampitso e.» Ahoana tokoa moa izany ? Izany no mahadiso paika antsika. Tsy vonona hiatrika ny tena fototry ny olana, hany ka tsy afa-mieritreritra ny ampitso. Dia ny hafa no mizaka ny vokany, dia ireo hibaby trosan’ny ampitso.
Nandalo teteza-mita foana ny famahana olana teto amin’ny firenena. nanantena fa raha misolo ny olona dia hivaha ny olana na hisy mesia vaovao. Kinanjo, ny omaly tsy miova. Manana olona ideolojika goavana ny politika ary tsy mety ho tan-dalàna ny fanjakana. Ny vahoaka araka izany no takalon’aina lava izao.
Manampy trotraka izany ny fitadiavana fankatoavana avy any ivelany vao afaka manatanteraka praograma, na PGE no anarany na PEM na hafa koa. Vidiana lafo ny fahafahana ary fahadisoan-kevitra ara-politika lava izao no zary endri-pitantanana ny firenena. Rahampitso ny taranaka mbola hihira ny hoe « ho tonga anie ny fahafahana ; aza ela Rafandrosoana fa mafy loatra ny vesatry Rafahantrana ; mafonja loatra ny jiogan-dRafahajambana. Tampin’ny vola ny masonay rehetra ka ny trosanay no mitambesatra aminay. »
Mandra-pahoviana vao ho haintsika ny misafidy izay modelim-pampandrosoana sahaza antsika ? Rahoviana ny Malagasy no hahatsapa indray fa tsy lalam-pandrosoana ny « fanaovana vain-drahalahy tsy mba maharary » ? Rahoviana ny fandrosoana baikoin’ny lalànan’ny tsena no hivadika ho fifanasoavan’ny mpirahalahy ka ny kely hanana ny azy ny lehibe hanana ny azy? Rahoviana ny fandrosoana katsahina androany no tsy ho fitaovana hikolokoloana fahefana ara-politika ? Heveriko fa ny velirano tsara indrindra sahaza antsika ankehitrio dia ny velirano atao amin’ireo taranaka mbola ho avy.
Fanambaran'ny FFKM : Aoka ny rariny hikoriana... - il y a 52 minutes
Matoan-dahatsoratra : Mitombo ny olana, ary ny vahaolana ? - il y a 6 jours
Matoan-dahatsoratra : Tambajotra mafia, manondrana harem-pirenena ! - il y a 13 jours